The Singer (2020) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
ဂြိုဆှနျးခတျေ ဘုရငျ Yeongjo လကျထကျမှာ မိနျးမပွနျပေးဆှဲခံခဲ့ရတဲ့ အတှကျနယျလညျ့သီခငျြးဆိုပီး ရှာဖှနေတေဲ့ လူတဈယောကျအကွောငျးကိုရိုကျကူးထားတာပါ. ရှေးခတျကိုရီယားရဲ့ ယခုမွနျမာလို ရာထူးအာဏာနဲ့ ခိုးဆိုးလုယကျမတရားမူ့တှကေို မွငျတှရေ့မှာဖွဈပီး Drama ကောငျးကောငျးကွညျ့ခငျြသူတှအေတှကျ အကွိုကျတှမေဲ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။ imdb ကတော့ 6.2 တော့ရှိနပေီး ထှကျလာတဲ့ ရကျပိုငျးပဲရှိသေးတဲ့ အသဈစကျစကျကားကောငျးလေးဖွဈပါတယျ
ဂျိုဆွန်းခေတ် ဘုရင် Yeongjo လက်ထက်မှာ မိန်းမပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရတဲ့ အတွက်နယ်လည့်သီချင်းဆိုပီး ရှာဖွေနေတဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာပါ. ရှေးခတ်ကိုရီယားရဲ့ ယခုမြန်မာလို ရာထူးအာဏာနဲ့ ခိုးဆိုးလုယက်မတရားမူ့တွေကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပီး Drama ကောင်းကောင်းကြည့်ချင်သူတွေအတွက် အကြိုက်တွေမဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ imdb ကတော့ 6.2 တော့ရှိနေပီး ထွက်လာတဲ့ ရက်ပိုင်းပဲရှိသေးတဲ့ အသစ်စက်စက်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်
Im Seong-cheol Jeong Mu-seong Jung In-gi Kim Byung-choon Kim Dong-wan Kim Ha-yeon Kim Min-jun Lee Bong-geun Lee Yu-ri Park Chul-min
Han In-soo Im Seong-cheol Jeong Mu-seong Jo Sang-ki Jung In-gi Kim Byung-choon Kim Dong-wan Kim Ha-yeon Kim Kang-hyun Kim Min-jun Lee Bong-geun Lee Yu-ri Oh Ji-hye Park Chul-min Park Jae-min Son Sook
Option 1 megaup.net 561 MB SD (480p)
Option2server.mfile.cloud 561 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 561 MB SD (480p)
Option4Vip Server 561 MB SD (480p)
Option5sharer.pw 561 MB SD (480p)
Option7server.mfile.cloud 1.4 GB HD (1080p)
Option9Vip Server 1.4 GB HD (1080p)